“ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသအ… – PVTV Myanmar
“ကျွန်တော်တို့ဟာ ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက် ဒေသအားလုံး ပြည်နယ်အားလုံး၊ လူထုအားလုံး တိုးတက်ဖို့၊ ဖွံ့ဖြိုးဖို့၊ လွတ်လပ်ဖို့၊ တန်းတူညီမျှမှုကို ပြတ်ပြတ်သားသားဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုကြိုးပမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျတော်တို့ အဲ့ဒီ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာ သူတို့ကိုယ်တိုင်က သက်ဆိုင်ရာ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသကြီးတွေရဲ့ အခြေခံဥပဒေကို ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းကြဖို့ အင်မတန်မှ အရေးကြီးပါတယ်”
Like – 6K Share – 745
ဦး လေးကြီး says:
2021-05-24 at 5:14 PM
2021-05-24 at 5:17 PM
2021-05-24 at 5:32 PM
ေဒါက္တာလွ်ံမႈန္းဆာေခါင္ခင္ဗ်ား၊ ေက်းဇူးျပဳ၍ ကြၽႏု္ပ္ရဲ႕ေမးခြန္းကိုတိက်ရွင္းလင္းစြာေျဖၾကားေပးေစလိုပါသည္။ သင္ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ဦးေဆာင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ fcdcc second(fraft)အား ျဖည့္စြက္သင့္ျပင္ဆင္သင့္တာေတြကို ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆြဲရန္NUG/CRPH မွ လက္မခံ၍ လား? ယခုလိုအသစ္ျပန္ေရးဆြဲလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မႈ ေတြ႕ဆံုညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားစြာကို မည္သို႔ေက်ာ္ျဖတ္မည္နည္း။ ကြၽႏိုပ္တို႔ျပည္သူအမ်ားစုကလြန္စြာသိခ်င္ေနပါသည္။ 👌👌
2021-05-24 at 5:33 PM
ရဲ နဲ့စစ်သား ဘယ်လောက်သေပေးမှ
R2P ဝင်မှာလဲ ??
မြေပြင်မှာလည်း Pdf တွေနဲ့ပူးပေါင်းနိုင်ရေးကို ဦးစားပေးလုပ်သင့် ​ဖြစ်နိုင်ရင် ခေါင်းဆောင်ထဲ့ပေးပြီး တိုင်းအလိုက်မြို့နယ်အလိုက်သင်တန်းပေးပြီး တပ်ခွဲတွေအဖြစ် သတ်မှတ်နိုင်အောင်လုပ်သင့်နေပြိ စနစ်တကျ ပြိုင်တူတွန်းနိုင်ရင် အောင်မြင်မူကလက်တစ်ကမ်းပဲ
2021-05-24 at 5:40 PM
2021-05-24 at 5:45 PM
Hello,Dr.Liang mo sakhan! I’m stunned by the NYforum and you are my teacher.
James Tun says:
2021-05-24 at 6:08 PM
လေးစားပါတယ် ဆရာ။ အရေးတော်ပုံ အောင်ကို အောင်ရမည်ပါ။
Van Mung says:
Karnal Naran says:
2021-05-24 at 10:22 PM
Im Myanmar Born Gorkhar. Please sir ဂေါ်ရခါးတွေကိုတပ်စုတခုဖြစ်အောင်လုပ်ကြပါလိုပြောစေချင်ပါတယ်
2021-05-24 at 11:01 PM
2021-05-25 at 1:35 AM
• ၂၀၀၈လိုပဲNCAပျက်ပြီလို့ပြတ်ပြတ်သားသားအတိအလင်းကြေညာပါ သံယောဇဉ်မပြတ်နိုင်သေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်သွားအောင်
• ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးဆွဲဖို့ပဋိညာဉ်နဲ့အတိုင်ပင်ခံကော်မရှင်ရေးဆွဲရေးကော်မရှင်တွေအဆင့်ဆင့်ကြားခံဖင့်နှေးနေလို့ယုံကြည်မှုအာမခံချက်အားနည်းပြီးအားတက်သရောပူးပေါင်းလာမှုမရှိသေးပဲဖြစ်နေတာ FCDCC ဖက်ဒရယ်ဖွဲ့စည်းပုံမူကြမ်းကိုကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးခဲ့တဲ့ဝန်ကြီးအသိဆုံးဖြစ်မှာပါ
Hrang Vung says:
2021-05-25 at 7:54 AM
Sam Loung says:
2021-06-07 at 11:48 AM
ခင်များတို့ ကရာဇဝတ်ကောင်တွေကိုရှေ့တန်းတင်အုံးမလို့လား nca. ဆိုတာစစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲ့သာပေါင်းညာစားအခွင့်အရေးလမ်းစဉ်ပဲမအလကိုအမြစ်ပြတ်ချေမှုန်းနိင်ရင်အဲဒါ NCA. ပဲနားလည်လား
NCA. ဖျက်သိမ်းမှ ဖက်လ်ဒရယ်ဖြစ်လာမှာ NCA. နဲ့ စစ်ကောင်စီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ပဲစဉ်းစားပါ ဆွေးနွေးပါ
Ko Aung Myo Lwin says:
2021-06-28 at 3:21 PM
မပြတ်သာရင်အကြိမ်ကြိမ် လူထုတရပ်လုံက မတရာမူ့ကို စော်ကာခံမူ့ကို ခံရအုံမှာ ခုလိုပွင့်လင်းစွာပြည်သူတရပ်လုံကို တိုင်သိ့ပြည်သိ့ ကြော်ညာပြောဆိုခြင်ကသာပြည်သူ့အစိုရဖြစ်မှာပါ